Vechidiki veMDC-T Voungana paHarvest House Vachichema Kushaya kwaVaTsvangirai
Vechidiki vebato reMDC-T vatanga kuungana pamuzinda webato iri weHarvest House muHarare usiku huno vachichema kushaya kwemutungamiri webato ravo, VaMorgan Tsvangirai.
Mukuru wevechidiki mubato iri, VaHappymore Chidziva vanoti vane kurwadziva kukuru, zvikuru sevechidiki, nekushaya kwaVaTsvangirai uku. VaChidziva vanoti tarisiro yavo sevechidiki yakanga iri panaVaTsvangirai.
“Zvese zvakaitika munyika yeZimbabwe kusvika pano nhasi kuti vanhu titi kwakuitika mapato akasiyanasiyana, tinozviziva kuti zvaibva nekuda kwekutanga kwavakaita ivo bandiko ratakaita reMovement for Democratic Change. Saka tine kurwadziwa kwakanyanya nekurasikirwa nemutungamiri wedu,” VaChidziva vanodaro.
Mumwe wevechidiki vaungana paHarvest House, VaMorgan Ncube, avo vanoona nezvekurongwa kwemusangano muboka revechidiki vachibva kuMateleland South, vanotsinhirawo mashoko aVaChidziva ekuti varasikirwa aya, vachiti VaTsvangirai vakapa vana veZimbabwe chivindi chekurwisana nehurumende yevaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
“Tiri kuchema Baba VaTsvangirai. Baba vakarakidza vanhu veZimbabwe vakavapa chivindi chekurwisana [nevaive mutungamiri wenyika] naRobert Mugabe. Baba vakapa kuti vana veZimbabwe tive netariro yekuti munyika muno munogona kuvawo nemumwe mutungamiri asiri Mugabe. Tiri kuchema. Tiri kurwadziwa,” VaNcube vanodaro.
VaTsvangirai, vashayira kune chimwe chipatara chemuSouth Africa neChitatu uko vanga vachirapwa chirwere chegomarara change chavatambudza kwenguva yakareba.
Mutevedzeri waVaTsvangirai, VaElias Mudzuri, vatenda kuStudio7 kuti ichokwadi kuti mutungamiri webato ravo ashaya.
VaMudzuri ndivo vakanzi nemhuri yaVaTsvangirai vanotaura nezvehurwere hwaVaTsvangirai vakamirira bato.
Mashoko ekushaya kwaVaTsvangirai atsinhirwawo nehama yepedyo yaVaTsvangirai, iyo yati haikwanisi kutaura zvakawanda panguva ino.
VaMudzuri vati bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushaya kwaVaTsvangirai
VaTsvangirai, avo vakamboita mutungamiri wehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa nebato reZanu PF, vashaya vave pedyo nekusvitsa makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa, uye vashaya panguva iyo mubato ravo muine makakatanwa ekuti ndiyani akafanobata chigaro chemutungamiri webato iri pakati paVaNelson Chamisa naVaElias Mudzuri.
MDC-T yanga yakatarisirwa kuita musangano wechimbi chimbi nemusi weChina muHarare wekuzeya makakatanwa ari mubato iri.
Zvichakadaro, mizinda yeAmerica neBritain muZimbabwe yaburitsa mashoko ekunyaradza zvichitevera kushaya kwaVaTsvangirai.
Mashoko aburitswa nemizinda iyi padandemutande reTwitter anoti inobatana nevana veZimbabwe munyika yose mukuchema kushaya kwemutungamiri wezvematongerwo enyika akanga asinganeti kurwira rusununguko pamwe nehutongo hwegutsa ruzhinji.
Muzinda weAmerica wati unoremekedza kurwira kwavo kuti mapato ose ezvematongerwo enyika abatwe zvakaenzana, uye kurwira kwavo kuti izwi remwana weZimbabwe wese rinzwikwe.